Mudaaharaad rabshado wata oo ka dhacay magaalada Laascaanood, sababayna dhimasho iyo dhaawac dad rayad ah. – Radio Daljir
Febraayo 6, 2010 12:00 b 0
Laascaanood, Feb 06 – Mudaharaad xoogan ayaa subaxnimadii saaka ka dhacay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool; mudahraadkan ayaa bilowday 7:00AM subaxnimo ee saaka, kana dhashay kadib markii xabsiga loo taxaabay qaar ka mid ah culimaa al diinka magaalada Laascaanood, iyo macalimiinta dhiga iskuulaadka magaalada.
Mudahraadkan oo ay soo abaabuleen dhalinyaro ka caraysan xariga lagu la kacay maclimiinta iyo culimada ayaa ku baahey guud ahaan xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Laascaanood.
Ciidmada bilayska maamulka Somaliland ee gacanta ku haya magaalada Laascaanood ayaa sameeyey isku day ay ka hortagaan dadkii mudaharadka dhigayey kuwaasoo rasaas ooda kaga qaaday dadkii shacabka ahaa ee mudahraadayey.
Mudahraadkan oo geystey khasaare lixaad leh oo soo gaadhey shacabka iyo ciidamda maamulka Somaliland ayaa inta la og yahay waxaa ku dhintay 3 qof oo shacab ah, sidoo kalena waxaa dhaawac soo gaadhey 5 askari oo katirsan ciidamada Somaliland, kadib marki uu qalibmey gaadhi ay wateen, oo ka qayb qaadanayey joojinta mudaharaadka.
Ciidamada bilayska ayaa la sheegay in ay ku guuldaraysteen joojinta Mudaharaadka taasoo sababtay in gudaha magaalada ay soo galaan ciidanka Milataarka ah kuwaasoo la sheegay in ay suuqa soo galeen, iyagoo ku hubaysan gaadiidka Dagaalka,kuwaasoo adeegsadey rasaasta ka dhacda qoryaha waaweyn ee tiknikada loo yaqaan.
Rasaastii ay ridayeen ciidamada militarigu ayaa sababtay khasaaraha 3 sadex qof oo shacabka kuwaasoo mid ka mid ah lagu toogtey badhtamaha magaalada, sidoo kale nin shacab ah ayaa gaadhi ciidan ku jiidhay badhtamaha laamiga, halka midka kalena baabuur la mariyey isaga iyo meharadiisa.
Nin ka mid ah ganacsatada yar yar ee magaalada, laguna magacaabo Aadan Dhegaqool, ayaa waxaa jiidhay baabuur tikniko ah, nooca loo yaqaano suuga, isagoo ku sugan meheradiisa.
Ma aha markii ugu horeysey oo mudahraad noocan ahi ka dhaco magaalada Laascaanood ee gobolka Sool tan iyo intii ay gacanta u gashay maamulka Somaliland, 15-kii October sanaddii 2007-dii.
Si kastaba ha ahaatee mudahraadkan maanta ka dhacay magaalada Laascaanood ayaa ahaa midkii ugu xooganaa ee ka dhaca magaalada Laascaanood muddoyinkii u danbeeyey, soconayeyna mudo 5 saacadood ah.
Burcad-badeed Soomaali ah oo afduubatay markab ka diiwaan gashan Liibiya, lana timid xeebaha Laasqoray.